Dani “Dad Xamar jooga ayaa fariimo u soo diraya odayaasha Boosaaso” – Hornafrik Media Network
Dani “Dad Xamar jooga ayaa fariimo u soo diraya odayaasha Boosaaso”
Madaxweynaha maamulka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo kulamo isaga iyo Madaxweynaha Jubbaland ay uga socdaan magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan tan gobolka Bari.
Dani ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay dhibaato ka wado gobolka Bari, isla markaana ay ku howlantahay arrimo ku aadan iska hor keenidda Puntland iyo shacabkeeda.
Madaxweyne Dani ayaa sheegay inay jiraan shaqsiyaad ka tirsan dowladda dhexe oo ka shaqeynaya, sidii ay isaga hor keeni lahaayeen xukuumaddiisa iyo odayaasha dhaqanka magaalada Boosaaso.
Dani ma carrabaabin shakhsiyaadkaas, balse waxa uu sheegay inay fariimo u soo diraan qaar ka mid ah waxgaradka, iyadoo ujeedadu yahay inay ka hor keenaan xukuumaddisa, si buu yiri khal khal siyaasadeed looga abuuro Puntland.
odayaasha dhaqanka Puntland ayuu madaxweyne Dani ugu baaqay inay kala shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida siyaasadeed ee maamulka, meelna iska dhigaan waxa aan dantooda aheyn sida uu hadalka u dhigay.
Labo maalin ka hor ayey aheyd markii xabsiga magaalada Boosaaso laga sii daayey odayaal ka soo jeeda magaalada Boosaaso oo horay u dhaliilay xukuumadda madaxweyne Dani, iyagoo si weyn ugu dhaliilay heshiiska ay shirkadda DP World ku maamusho dekedda magaalada Boosaaso, taas oo sababtay in lagu soo oogo kicin dad weyne xabsi iyo ganaax lacageedna lagu xukumo, wallow markii dambe uu cafiyey madaxweynuhu.
Hadalka Madaxweyne Dani ayaaku soo aadaya iyadoo khilaaf xoog leh uu kala dhexeeyo dowladda federaalka, sidoo kalena uu magaalada Boosaaso kula suganyahay Axmed Madoobe oo isna aan xiriir wanaagsan la laheyn dowladda dhexe, waxayna ka arinsanayaan arimaha maamulladooda iyo xiriir xumida ka heysata dhanka dowladda federaalka.